Lesona nianarana: Sehatra haino aman-jery sosialy sy fananganana adiresy Blockchain | Martech Zone
Ny fananganana ny blockchain ho vahaolana ahazoana antoka ny angona dia fiovana ankasitrahana. Vao mainka izao, noho ny sehatra media sosialy nanararaotra ny fisian'izy ireo nanararaotra nanararaotra ny tsiambaratelon'ny olona tsy tapaka. Zava-misy izany. Zava-misy izay nahasarika ny fitarainan'ny besinimaro tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Tamin'ny taon-dasa fotsiny, Nirehitra mafy ny Facebook amin'ny fampiasana diso ny angona manokana an'ny mpampiasa 1 tapitrisa any Angletera sy Wales. Ilay goavambe media sosialy notarihin'i Mark Zuckerberg koa dia voarohirohy tamin'ny raharaha ratsy momba an'i Cambridge Analytica (CA) izay nahatafiditra ny fanangonam-bokin'ireo olona 87 tapitrisa (manerantany) mba handotoana ny hevitra politika sy hikendrena dokam-barotra politika ho an'ny fanomezana mandritra ny fifidianana.
Raha misy sehatra media sosialy miorina amin'ny blockchain tsy afa-mihetsika amin'ny malversations toy izany. Ho tsara lavitra noho izany ny fiainana.
Nanazava ny Facebook-Cambridge Analytica Imbroglio, loharano: Vox.com
Mandroso, na dia CA aza dia nahasarika ny hatezerana sy ny fitsikerana an'izao tontolo izao, an lahatsoratra navoaka tao amin'ny Vox tamin'ny 2 Mey 2018, namotopototra ny antony mahatonga izany bebe kokoa tantara ratsy amin'ny Facebook mihoatra ny an'i Cambridge Analytica.
… Ity dia manasongadina adihevitra lehibe kokoa momba ny haben'ny fahatokisan'ny mpampiasa ny Facebook amin'ny angon-drakitrao. Facebook dia namela mpamorona antoko fahatelo hamolavola fampiharana iray ho amin'ny tanjona tokana hanangonana angona. Ary afaka nanararaotra loophole ilay developer mba hanangonana vaovao tsy ny olona nampiasa ilay app ihany fa ny namany rehetra - nefa tsy fantatr'izy ireo
Inona no vahaolana amin'ity toe-javatra mahatsiravina ity? Rafitra fanamarinana miorina amin'ny blockchain. Vanim-potoana.
Ahoana no ahafahan'ny Blockchain manampy amin'ny fisorohana ny fanitsakitsahana ny fiainana manokana amin'ny haino aman-jery sosialy sy ny familiana data?
Matetika, misy ny fironana hampifandray ny haitao blockchain amin'ny Bitcoin. Saingy, mihoatra lavitra noho ny bokotra handaminana ny fifanakalozana Bitcoin izany. Miaraka amin'ny fandoavam-bola, ny blockchain dia manana tanjaka ampy hanoritana ny fitantanana rojom-bary, ny fanamafisana ny angona ary ny fiarovana ny maha-izy azy.
Ankehitriny, tsy maintsy manontany tena ianao ianao hoe ahoana no ahafahan'ny haitao vao teraka vao niseho 12 taona lasa izay hamaritana ireo sehatra rehetra ireo.
Eny, izany dia satria isaky andian-tsoratra ny angon-drakitra momba ny sakana iray dia azo antoka amin'ny alàlan'ny algorithm hashing. Voamarina amin'ny alàlan'ny tamba-jotra solosaina ny angona alohan'ny hidiranao ao anaty lisitra, mba hialana amin'ny mety ho fikitikitihana, fanapahana, na fanararaotana tambajotra ratsy.
Ahoana ny fiasan'ny Blockchain, loharano: msg-global
Noho izany, mampiasa blockchain ho fanamarinana misy dikany tonga lafatra rehefa miresaka sehatra media sosialy. Fa maninona Satria ny sehatra media sosialy dia mampiasa fotodrafitrasa nentim-paharazana ho an'ny fitehirizana sy fitantanana fampahalalana azo fantarina (PII). Ity fotodrafitrasa afovoany ity dia manome tombony lehibe amin'ny orinasa, nefa lasibatra goavambe ihany koa ho an'ireo mpijirika - araka ny hitan'ny Facebook tamin'ny fikafika Kaontin'ny mpampiasa 533,000,000.
Fampidinana fangatahana mangarahara tsy misy soritra nomerika manan-danja
Blockchain dia afaka mamaha ity olana ity. , ao amin'ny rafitra iray itsinjaram-pahefana, ny mpampiasa tsirairay dia afaka mifehy ny angon-drakitra manokana ananany, ka mahatonga ny hack an-jatony olona an-jatony tsy ho vita akory. Ny fampidirana ny cryptographie key public dia manatsara kokoa ny fiarovana ny angon-drakitra, ahafahan'ny olona mampiasa fampiharana amin'ny solon'anarana nefa tsy mamela dian-tongotra nomerika manan-danja.
Ny teknolojia ledger nozaraina (DLT) dia mampihena ny fidiran'ny antoko fahatelo amin'ny angona manokana. Izy io dia miantoka fa mangarahara ny fizotry ny fanamarinana ny fampiharana ary ilay olona nahazo alalana ihany no afaka miditra amin'ny angon-drakitra misy azy.
Ny tambajotra sosialy miorina amin'ny blockchain dia hanome anao hery hifehezana ny mombamomba anao amin'ny famelana anao hifehy ny lakilen'ny cryptographic izay mamela ny fidirana amin'ny angon-drakitrao.
Ny fanambadian'ny fananganana Blockchain sy ny media sosialy
Ny fananganana Blockchain dia mbola miatrika bottlenecks tena ilaina. Ny teknolojia dia nanaporofo fa mety amin'ny fiarovana ny angon-drakitra mora tohina, saingy mampivarahontsana ny hevitra momba ny tena fandalovana. Mbola tsy azon'ny olona tsara ny blockchain ary toa atahoran'ny jargon teknika maro, ny interface interface sarotra, ary ny vondrom-piarahamonin'ny mpampivelatra.
Ny ankamaroan'ireo teboka fidirana misy dia misy sakana avo be amin'ny fidirana. Raha ampitahaina amin'ireo sehatra media sosialy, ny habaka blockchain dia tototry ny teknika tsy hain'ny olon-tsotra. Ary ny tontolo iainana dia namolavola laza ratsy ho an'ny fampiroboroboana ny fisolokiana sy ny fametahana rug (araka ny iantsoana azy ireo azy amin'ny terminology DeFi).
Izany dia nanakana ny fitomboan'ny indostrian'ny blockchain. 12 taona mahery izay no lasa hatramin'ny nanorenan'i Satoshi Nakamoto an'izao tontolo izao ny blockchain, ary na eo aza ny tombony azo avy aminy, dia mbola tsy nahita tanjaka ampy ny DLT.
Na izany aza, ny sehatra sasany dia manampy amin'ny fanalefahana ny fizotran'ny fananganana blockchain amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo vahaolana amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo rindrambaiko itsinjaram-pahefana (dApps) ho malala-tanana amin'ny mpampiasa ary manitatra ny fidirana. Sehatra iray toy izany ny AIKON izay manamora ny fampiasana blockchain amin'ny alàlan'ny vahaolana tompony antsoina hoe ID ORE.
Ny ekipa ao amin'ny AIKON dia namolavola ORE ID hahafahana mampiditra ny blockchain amin'ny alàlan'ny sehatra media sosialy. Ny olona dia afaka mampiasa ny logins sosialiny (Facebook, Twitter, Google, sns.) Hanamarinana ny mombamomba ny blockchain.
Na ny fikambanana aza dia afaka mitaingina ny mpanjifany ao amin'ny ekosistra blockchain amin'ny alàlan'ny famoronana milamina ny mombamomba azy ireo (mpanjifa) miaraka amin'ireo fidirana haino aman-jery sosialy misy.
Ny hevitra ao ambadik'izany dia ny fampihenana ny fahasarotana amin'ny fidirana amin'ireo rindrambaiko sakana. Ny vahaolana momba ny ORE ID an'ny AIKON dia miteraka dikany sy fampindrana lojika avy amin'ny fampiharana efa misy ny fampiharana nentim-paharazana ahafahana miditra amin'ny alàlan'ny fidirana sosialy.
Fa maninona no ilaina ny fanandramana mpampiasa milamina mba hiasa ity fanambadiana ity?
Tsy toy ny sehatra media sosialy, ny interface interfaces mpampiasa app blockchain no vato misakana lehibe indrindra manakana ny teknolojia blockchain tsy hiaina fananganana marobe. Ireo olona izay tsy dia mahay ara-teknika loatra dia mahatsapa ho ailikiliky ny olona ary tsy mahatsapa ho voatosika handroso amin'ny fampiasana serivisy miorina amin'ny blockchain.
Ny fampidirana am-pahamendrehana ny blockchain sy ny sehatra media sosialy (amin'ny alàlan'ny interface interface intuitive) dia afaka manampy ny orinasa sy ny orinasam-pandraharahana amin'ny mpandeha an-tampon'ny DLT bandwagon, mandrisika ny fananganana ny haitao. Tokony ho afaka mampiasa serivisy blockchain ny olona amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny alàlan'ny mailaka, telefaona, na fidirana sosialy fotsiny. Tsy tokony ilaina ny mahatakatra ny hafitsok'ireo teknolojia itsinjaram-pahefana rehetra.
Izany dia raha te-hanatratra ny fananganana blockchain be dia be isika.
Tags: aikonalvin changfanamarinanabitcoinblockchainfanamarinana blockchainCambridge Analyticany fandraisana ho mpikambanaPrivacy vaovaoFacebookmark zuckerbergmsg eran'izao tontolo izaoore idp2ppeer to peerny fiainana manokanahaino aman-jery sosialytsiambaratelo media sosialyfanamarinana